Tag: kuendesa | Martech Zone
Kuendesa email kuinbox kunoenderera kuve chiitiko chinoshungurudza chemabhizinesi ari pamutemo sezvo vapambi vanoenderera vachishungurudza nekukuvadza iyo indasitiri. Nekuti zviri nyore kwazvo uye zvakachipa kutumira email, spammers vanogona kungo svetuka kubva kusevhisi kuenda kusevhisi, kana kunyatso script ivo zvavo vanotumira kubva kuseva kuenda kuseva. Vashandi veInternet service (ISPs) vakamanikidzwa kuratidza vanotumira, kuvaka mukurumbira pakutumira IP kero nenzvimbo, pamwe nekutarisa pane imwe neimwe
Tiri kutarisa zvakanyanya pakushambadzira kweemail nguva pfupi yadarika nekuti tiri kunyatsoona matambudziko mazhinji muiyi indasitiri. Kana mukuru anoramba achikushungurudza pane yako email runyorwa kukura, iwe unonyatsoda kuvanongedzera kuchinyorwa chino. Icho chokwadi ndechekuti, yakakura uye yakakura yako email rondedzero, iyo inogona kukuvara zvakanyanya iyo inogona kunge iri kune yako email kushambadzira kushanda. Iwe unofanirwa, pachinzvimbo, tarisa kune vangani vanyoreri vanoshanda vauinako pane yako